Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ka hadlay sharcinnimada kursigiisa | dayniiile.com
Home WARKII Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ka hadlay sharcinnimada kursigiisa
Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ka hadlay sharcinnimada kursigiisa
Ergayga gaarka ah ee madaxweynaha Soomaaliya u qaabbilsan arrimaha abaaraha iyo gargaarka, xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa markii ugu horreysay ka hadlay inuu sharci ahaan xildhibaannimada waynayo iyo in kale, ergaynimada darteed.
Xildhibaan Cabdiraxmaan ayaa BBC Somali siiyay wareysi uu arrimahaas ayaa yiri: “Xil aan qabtay ayaanba jirinba! Xil waxaan u aqaannaa qofka marka la magacaabo, hay’ad uu u shaqo tago inay jirto.
Wuxuu intaa ku daray “taliye nabad-sugid oo hadda waxaa la magacaabay xildhibaan ah tusaale ahaan. Hay’ad ayuu u shaqo-tagay subixii oo uu xilkeeda la wareegay. Aniga cidda aan xilka kala wareegay yaa waaye? Hay’adda aan u shaqo-tagay waa tee? Intee ayay ka diiwaangashan tahay? Yaa shaqaale ka ah? Ma jirto!”
Wuxuu sheegay in shaqada uu hadda hayo ay tahay mid uusan mushaar ku qaadan oo uu ku tabarrrucay. Wuxuu aaminsan yahay in howshaas ay qeyb ka tahay waajibaadkiisa xildhibaannimo.
Xildhibaanka ayaa xusay shaqada uu madaxweynaha u xilsaaray in aysan waxba dhaamin tan guddiyada baarlamaanka ee mararka qaar loo diro muhiimado gaar ah. “Xildhibaanka muhiimaddiisa oo dhan waa inuu dadka u shaqeeyo. Wax kale maba ahaba – ama inuu ugu shaqeeyo inuu sharci-dejiyo ama xukuumadda uu dabagalo ama dadka inuu u [adeego].”
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa 24-kii May u magacaabay xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur inuu noqdo ergayga xiriiriya howlgalka arrimaha bani’aadannimada iyo gargaarka, inuu ka warqabo xaaladda dadka dhibaataysan, kaalmada caalamiga ah iyo kaalmada Soomaalida dhexdeeda. Sidoo kale, marka abaarta laga baxo kaddib, in uu ka shaqeeyo barnaamij cad oo dadkii ay saameysay ee xoolo beelay noloshooda iyo mustaqabalkooda sidii looga sii warqabi lahaa ah.
Previous articleFarmaajo waa madaxweyne hore oo Soomaaliyeed marka uu xilka ka degtay Dastuurka ayaa damaanat qaaday
Next articleDhimasho & dhaawac oo ka dhashay shil ka dhacay Muqdisho
Madaxweynaha Jubbaland oo gaaray degmada Dhoobleey